Waa maxay isbadalka laga sugayo maamulka Gobalka Banaadir sanadkan cusub ? – Bandhiga
Waa maxay isbadalka laga sugayo maamulka Gobalka Banaadir sanadkan cusub ?
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) oo shir gudoomiyay kulanka Todobaadlaha ah oo ay yeeshaan Guddoomiyeyaasha 17ka degmo ee Gobalka Banaadir ayaa lagaga hadlay qorshaha faya dhowrka Caasimadda, amniga, Olalaha Isxilqaan iyo fursadaha shaqo abuurka dhallinyarada ee sanadkan 2019.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa la wadaagay Maamulka Degmooyinka muhiimadda ay leedahay dardar gelinta bilicda Caasimadda iyo baahinta adeegyada asaasiga, isagoona sheegay in sanadkan la kordhindoono kormeerka iyo la socodka shaqooyinka joogtada ah ay u xilsaaran yihiin dawladaha Hoose ee Degmooyinka Gobolka.
Shirkan ayaa ku qabsoomay xarunta Dawladda Hoose ee Degmada Deyniile, iyadoona Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir ay soo bandhigeen qorsheyaashooda waxqabad ee ku aaddan sanadkan ee arrimaha bulshada, la dagaalanka musuq maasuqa iyo baahinta adgeeyada asaasiga ah.
Maamulka Gobalka Banaadir waxaa la gudboon in uu wax badan ka qabto arrimaha Bini’aadanimo ee ka taagan caasimadda Muqdisho iyo xaqiijinta amaanka.
Sidoo kale waxaa meesha ka maran isla xisaabtan dhab ah iyadoo aysan jirin qorshe weyn oo u dagsan maamulka gobalka Banaadir si Muqdisho u hormarto.
Burburka iyo qashinka wadooyinka caasimadda ayaa muhiimad gaar ah leh, waxaana meelo badan oo magaalada ka mid ah ka maqan adeegyada aas aaska u ah buslahada sida xarumo Caafimaad oo gobalka hoos yimaada iyo goobo waxbarasho.